Lego Friends, Marvel နှင့် Star Wars အထုပ်များမကြာမီလာမည်
03 / 10 / 2021 03 / 10 / 2021 Jack Yates 382 Views စာ0မှတ်ချက် 41424 တောတွင်းကယ်ဆယ်ရေးအခြေစိုက်စခန်း, 41683 သစ်တောမြင်းစီးခြင်းစင်တာ, ၅၀၀၇၀၆၀ အသင်းလိုက်စုစည်းမှု, ၅၀၀၇၀၆၁ ဖန်တီးမှုအစုအဝေး, ၅၀၀၇၀၆၂ အဆုံးစွန်ဆုံးအစုအဝေး, 66671 Mech Armor စုဆောင်းခြင်း, 66673 Lego Friends တိရစ္ဆာန်လက်ဆောင်အစုံ, ၆၆၆၇၄ Skywalker Adventures Pack, 75301 လုကာ Skywalker ရဲ့ X-Wing တိုက်လေယာဉ်, 76198 Spider-Man & ဆရာဝန် Octopus Mech တိုက်ပွဲ, Friends, Lego, Lego Friends, Lego Marvel, Lego Star Wars, Lego စူပါမာရီယို, Marvel, Star Wars, စူပါမာရီယို
အားလပ်ရက်ရာသီမတိုင်မီတွင်အသစ်သုံးမျိုးပေါ်လာသည် Lego အတွဲများအတွက် Marvel mechs၊ Star Wars နှင့် Friends တွေ့ပြီ
အဆိုပါ Lego ညွှန်ကြားချက်ဒေတာဘေ့စ်သည်အောက်တိုဘာလအတွက်အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးလတ်ဆတ်သောသုံးမျိုးဖြစ်နိုင်သည်ကိုထုတ်ဖော်သည် Lego အတွဲများကိုနှစ်မကုန်မီဖြန့်ချိသည် Lego စူပါမာရီယို.
အဆိုပါ LEGO Super Mario အတွဲများ တစ်ခုချင်းစီကိုကွဲပြားခြားနားသောဆောင်ပုဒ်တစ်ခုစီပြသပြီးမော်ဒယ်များ၏စုစုပေါင်းစျေးနှုန်းအတွက်အကွာအဝေးအတွင်းတည်ဆောက်မှုများစွာကိုကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးအပိုဆု VIP အမှတ် ၂၄၀၀ အထိရခဲ့သည်။
ညွှန်ကြားချက်ဒေတာဘေ့စ်သည်ဤအစုများလား၊ အီးလားဆိုသည်ကိုအတည်မပြုပါxtra VIP အမှတ်များကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်၊ ပစ္စည်းများကိုအမည်ပေးထားသည် 66673 Lego Friends တိရစ္ဆာန်လက်ဆောင်အစုံ, Lego Star Wars ၆၆၆၇၄ Skywalker Adventures Pack နှင့် Lego Marvel 66671 Mech Armor စုဆောင်းခြင်း လျော်ညီစွာ ၎င်းတို့အားလုံးကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်သို့ရောက်ရှိလာသည်ဟုတံဆိပ်ကပ်ထားပြီးအမည်များသည်အကြောင်းအရာများကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။
ဤအထုပ်များ၏နံပါတ်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အပါအဝင်ယခင်ထုတ်ထားသောစုစည်းမှုများကဲ့သို့နံပါတ်များရှိသည် DOTS 66664 Bundle Pack 1, 66665 Bundle Pack 2၊ Marvel ၆၆၆၇၁ Mech သံချပ်ကာစုဆောင်းခြင်း ၃ in 66671 နှင့် ၂၀၂၀ Marvel ၆၆၆၃၅ Super mech pack၊ CITY 66636 City2in 1 အထုပ်နှင့်အခြားအရာများ ဤသည်နှင့်လည်းညီညွတ်သည် 66667 Looney Tunes - ၆ ထုပ် နှင့် 66657 စီးရီး 21 -6Pack ကို၎င်းသည်အထုပ်များဖြစ်နိုင်သည်ဟူသောအယူအဆအတွက်ငွေချေးခြင်းဖြစ်သည်။
အတည်မပြုနိုင်သေးသော်လည်း၎င်းတို့သုံး ဦး ၏နောက်ဆုံးအချိန်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အပိုင်းအခြားနှင့်လာနိုင်သည် Lego Marvel mech အစုံအပါအဝင်၊ 76198 Spider-Man & ဆရာဝန် Octopus Mech တိုက်ပွဲ နှစ်စမှာဖြန့်ချိခဲ့တဲ့အထုပ်တစ်ခုတည်းနဲ့
အဆိုပါ Lego Friends အစုံတွင်တိရိစ္ဆာန်ဗဟိုပြုပုံစံများပါ ၀ င်သည် 41424 တောတွင်းကယ်ဆယ်ရေးအခြေစိုက်စခန်း နှင့် 41683 သစ်တောမြင်းစီးခြင်းစင်တာမရ။ ၎င်းတို့အနက်မည်သည့်အတွက်ရွေးချယ်သည်ကိုအတည်မပြုရသေးပါ။
အဆိုပါ Lego Star Wars Skywalker Adventures Pack သည် pin ရန်ခက်ခဲသော်လည်း၊ Skywalker မိသားစု၏ minifigures များပါ ၀ င်သောအစုံများပါ ၀ င်နိုင်သည်။ 75301 လုကာ Skywalker ရဲ့ X-Wing တိုက်လေယာဉ်.
← Brick Pic of the Day: ဖွင့်ပွဲတွားသွားပြီးနောက်
LEGO VIP သည်ကံစမ်းမဲများတွင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်သော Fender Stratocaster ကိုကမ်းလှမ်းသည် →